यी ५ वस्तुहरू शिवजीको पुजा आरधना गर्दा कहिल्यै पनि चढाउनुहुँदैन
रोचक यी ५ वस्तुहरू शिवजीको पुजा आरधना गर्दा कहिल्यै पनि चढाउनुहुँदैन
२. तुलसी : शिवपुराणमा उल्लेख गरिएअनुसार, दै’त्य जालन्धरको व’ध गर्न एकदमै क’ठीन थियो, किनभने उनकी पत्नीको पतिव्रत शक्तिले उनलाई कुनै पनि देवताले हराउन नसक्ने शक्ति दिएको थियो।
तर विष्णु भगवान एकदमै चलाख! जाल न्धर र महादेवको यु’द्ध भैरहेको बेला विष्णु भगवानले जान्धरको रूप धारण गरी उनकी पत्नी ‘तुलसी’को पतिव्रत शक्ति लु’ट्न गए।
जालन्धररूपी विष्णुले तुलसीको पतिव्रतलाई लु’ट्नेबित्तीकै महादेवले जालन्धरलाई भ’ष्म बनाइदिएका थिए।आफ्नो पतिको मृ’त्यु र आफूप्रतिको धो’काबाट क्रो’धित तुलसीले महादेवलाई आफ्नो पवित्र पातले कहिल्यै पनि पुजा गर्न नपरोस् भनेर श्रा’प दिन्छिन्।
त्यसैले गर्दा नै शिवजीलाई तुलसीको पात चढाउनुहुँदैन भनेर शिवपुराणमा उल्लेख गरिएको छ।
३. सिन्दूर: विवाहित महिलाहरूको लागि सिन्दूर एकदमै महत्वपूर्ण र पवित्र मानिने गरिन्छ। आफ्नो पतिको लामो आयुको लागि हिन्दु महिलाहरूले सिउँदोमा सिन्दूर लगाउने गर्दछन्। तर, शिवजी त्रीमूर्तीदेवहरू मध्ये संहारकर्ता हुन्। त्यसैले नै शिवजीलाई सिन्दूर प्रयोग गरेर पुजा गर्नु ठूलो भूल हुने मान्यता छ ।
५. नरीवलको पानी: शिवजीलाई चढाउन नहुने पवित्र वस्तुहरूमध्ये नरीवलको पानी पनि एक हो। शिवजीलाई सिङ्गो नरीवल चढाउनु कुनै भूल हुँदैन, तर शिवलि’ङगमा कहिल्यै पनि नरीवल फुटाएर पानी नचढाउनुहोला। शिवपुराणमा, यस्तो गरेमा शिवजी रिसाउने र अनि’ष्ट हुने बिश्वास गरिन्छ।
जसले आफ्नो इच्छा र चाहनाको धरातलभन्दा गहिरिएर आफैलाई बुझ्ने कोशिस गर्छ, त्यहि मानिसले मात्रै खुसीको स्वाद चाख्न पाउँछ।
विभिन्न धर्मग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएका शिवजीको कथाबाट यहि सिक्न सकिन्छ।